Xiaomi sy Apple dia miady amin'ny fitarihana eo amin'ny tsenan'ny akanjo | Androidsis
Xiaomi sy Apple dia manjaka amin'ny tsenan'ny entina mitafy
Eder Ferreño | | About us, SmartWatch
Ny tsenan'ny fitafiana dia nitombo nandritra ny fotoana. Mihabetsaka ny marika mamoaka ny fehin-tànany na smartwatches eny an-tsena. Ankehitriny, efa manana ny tarehimarika isika amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity amin'ity fizarana ity, ary hitantsika fa tery tokoa ny tolona ho an'ny voalohany. Hatramin'ny be loatra Xiaomi sy Apple no mpitarika eny an-tsena, miaraka amin'ny fizarana tsena mitovy.
Ny fivarotana vokatra amin'ity sokajy misy marika roa ity dia saika mitovy. Na dia mahagaga aza fa mijoro amin'ny Apple i Xiaomi, rehefa ny marika Mi Sinoa ihany no alefan'ny marika sinoa eny an-tsenaTsy manana famantaranandro marani-tsaina toa ny an'ny marika amerikana izy.
Ny fahasamihafana eo amin'ny varotra eo amin'ny orinasa roa dia kely. Tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ny taona, dia nivarotra smartwatches 3.8 tapitrisa eran-tany i Apple. Xiaomi dia nivarotra haba miisa 3.7 tapitrisa Mi Band tao anatin'ireo telo volana voalohany tamin'ny taona. Samy manana ny anjarany 18% ny orinasa roa tonta.
Ka samy mifaninana hitarika eo amin'ny tsenan'ny akanjo anaovan'izao tontolo izao. Amin'ny laharana fahatelo dia hitantsika i Fitbit, miaraka amin'ny anjaran'ny tsena 11%. Ny Top 5 dia nikatonin'i Garmin sy Huawei, miaraka amin'ny fizarana tsena 7% sy 6%.
Ny iray amin'ireo angon-drakitra mahaliana indrindra izay nangonin'i Canalys tamin'ny famakafakana azy dia ny fahitantsika fa maro kokoa ny brasele no amidy manerantany, na dia manome tombony bebe kokoa aza ny famataranandro. Miteraka tombony inefatra avo heny ho an'ny orinasa izy ireo noho ny brasele.
Xiaomi dia marika iray izay ao anatin'ny fotoana fohy dia efa eo an-tampon'ity fizarana ity. Ankoatr'izay, amin'ny faran'ity volana ity dia ho afaka hihaona amin'ny Xiaomi Mi Band 3 isika, izay mampanantena fahombiazana vaovao ho an'ny marika. Angamba izany no fampaherezana ilainao mba ho lasa marika amidy indrindra amin'ity fizarana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi sy Apple dia manjaka amin'ny tsenan'ny entina mitafy
Avereno jerena ny Aermoo M1
Xiaomi Redmi 6 voalaza fa nisy fivoahana tao amin'ny TENAA